Nzira yekuwana sei chigadzirwa chako pa Amazon - nokukurumidza uye nyore nyore?
Amazon inozivikanwa seyakanyanyozivikanwa pamusika pamusika kune chimwe chinhu chakakomba mamiriyoni 170 evanhu vasati vashanyi vanofungidzirwa pamwedzi. Ndicho chikonzero kana iwe uri muchengeti wechidiki uye uchida kuziva kuti ungawana sei chigadzirwa chako paAmazon - iwe watova munzvimbo yakarurama. Pasi pandinoenda kuzokuratidzai chidimbu chipfupi neshato murayiridzo kuti iwe unzwisise kuti ungakurumidza sei kuwana chigadzirwa chako pa Amazon - uye kutanga kukugadzira kubudirira kwekutengesa kwekutengesa pakarepo. Saka, ngatitsvakei muzvinyorwa zvekuita.
Nzira Yokuwana Nayo Yenyu Yakawanikwa paAmazon
Pane chimwe chinhu, regai ndiratidzei kuti mungatengesa sei kuma Amazon - made in india led tv brand. Chinhu ichocho ndechokuti nzira yekutengesa kune iyo inogona kunge yakajeka kana yakaoma - kungofanana nerudzi rwezvigadzirwa, rutivi rwavo, kana huwandu huchaisa sechinangwa chezvose zvamunenge maita. Asi apa pane zvikamu zvina zvinokuitira zvinhu zvakanyanya nyore, kunyanya izvo zvine chokuita nekuwana michina yako yakakurumidza kuiswa kuAmazon nenzira yakarurama:
1. Sarudza mutengesi wezvakanaka - kazhinji, inonyanya kuvimba nehuwandu hwebhizimisi raunoshandisa. Chaizvoizvo, unogona kutanga kutengesa nenzira mbiri dzakasiyana - kana sevanhu vashoma vatengesi (vakapa kuti zvamunotengesa mwedzi pamwedzi inowanikwa pasi pemakumi mana nemwedzi pamwedzi, mari yekutengesa yekushambadzira haichakupi mari inopfuura 1. 5 madhora pazvinhu zvakatengeswa ipapo), kana kutanga semuchengesi mutengesi kubva pakutanga (zvichipiwa kuti kutengesa kwako kwemwedzi kunotarisirwa kuenderera mberi kwezvinhu makumi mana zvakatengeswa pamwedzi, mari yako yaunotora pamwedzi inotanga pamadhora makumi mashanu pamwe chete nemari yekubhadhara mumwe munhu).
2. Ita wega maAlex account account - zvinoreva kuti iwe unofanira kuwana bhizinesi rako rekutengesa rakanyoreswa kuAmazon kusvika pakupedzisira kutengesa pamusoro apo. Kuti upedze chikamu ichi chekugadzirisa kambani, iwe uchakumbirwa neAmazzi kuti uzadze zvinotevera: Zita reBhizimusi, Zita reMutemo / Kero, Zvokutumira Zvokutumira, Bhuku reBhuku reBhangi, Contact Contact (zvose maAsia pachavo, uye ramangwana makambani).
3. Gadzira uye uzadze purogiramu yako yekutengesa yega - iyi ndiyo apo iwe uchatendera vanhu vose kutengesa kuAmerica kuti vazive kuti doro rako rekutengesa-denga rese rinorevei (mutengesi tsanangudzo chikamu, iwe pachako unofanirwa nekodhi seAmazon mutengesi, mitsara nemirairo yako yekudzorera / kubhadhara mutemo).
4. Iye zvino iwe unoziva kuwana chigadzirwa chako paAmazon - inguva yekutanga kutengesa uye kutumira! Ichokwadi, chikamu chinobatsira chekuita ichi kazhinji chinonyanya kuoma. Zvinoreva kuti iwe unofanira kuva katatu yako yekutsvaga optimization maitiro uye ramba uchidzidza nzira yekuita nayo yakawanda kunze kwekugadzirwa kwezvinhu zvako. Pakupedzisira, kuti uite kuti vatengese kwauri nekuda kwenzira inofambisa.